2012-03-18 ~ ကိုးဒီသွေး
ဦးမြင့်လှိုင်အား တရားဥပဒေအရ အရေးယူရန် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက တင်ပြ
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်အား The Hot News ဂျာနယ်ကို ထုတ်ဝေတဲ့ FACES Media Group အမှုဆောင် အရာရှိချုပ်နဲ့ အယ်ဒီတာချုပ် မမ က မေးမြန်းကာ ၂၀၁၂ မတ်လ ၂၃ - ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် Hot News ဂျာနယ် အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၈၄ တွင် ဖော်ပြထားတဲ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်အား တွေ့ဆုံခြင်း ဖော်ပြချက်များနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လွှတ်တော်အမတ်များက မကျေမနပ်ဖြစ်ကာ ဦးမြင့်လှိုင်အား တရားဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် အခွင့်အရေး ကော်မတီကို တိုင်ကြားထားကြောင်း သိရှိရပါတယ်။
ထို ဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်းက ဗီအိုအေ မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ် အသံလွှင့်သတင်းထောက် မသင်းသီရိကို “လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ အဓိက မကျေမနပ်ဖြစ်တဲ့ စကားစုတွေကတော့ - လယ်တဧကထဲကို ရေရောက်ဖို့ သိန်းဘယ်လောက်ကုန်တယ် ဆိုတာ၊ အဲဒီ ဈေးတွက်တွက်နည်းနဲ့ တွက်တာ သက်သက် အပြစ်တင်ဖို့ ဝေဖန်တာပဲ။ ဒါ - ဦးနှောက် မရှိတာပေါ့၊ ရှိရက်သားနဲ့ သက်သက် Negative ဆန်တာပေါ့၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီး စာမှ မတတ်၊ ဆယ်တန်းမှမအောင်ဘဲ။ လွှတ်တော်ထဲကို လာ ထိုင်နေတော့ သူများက ထဆို ထမယ်။ ထိုင်ဆိုရင် ထိုင်မယ်။ သူများက ခလုတ်နှိပ်ဆို နှိပ်တယ်။ သူကမှ မသိတာ၊ ဘာတွေ ပြောနေလဲ၊ သူကမှ နားမလည်တာ။ ရမ်းပြီး လုပ်နေတာ။ လှော်တဲ့ ကောင်ကလည်း လှော်ရမယ်။ ထိုင်တဲ့ကောင်ကလည်း ငြိမ်ငြိမ်လေး ထိုင်၊ အသက်ကြီးပြီဆိုရင် ငြိမ်နေရမယ်။ ငြိမ်ငြိမ်လေးမထိုင်ဘဲ အသားကုန် ဟိုလှုပ် ဒီလှုပ်၊ လှုပ်နေရင်တော့ ဒါ ဘုန်းကြီးအရူးနဲ့ လှေလူးလို့ ပြောတာ - အဲဒါ၊ အဲဒီ အပိုဒ်တွေ ပေါ့ ဗျာ။ အဲဒီအပေါ်မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက တော်တော့်ကို မကျေနပ်ဖြစ်ပြီးတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲ ဖြစ်သွားတာဗျာ့။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မီတီကို နိုင်ငံတော်ပိုင် သတင်းစာ၊ ရုပ်မြင်သံကြားတို့ကနေ တရားဝင် ၀န်ချတောင်းပန်ဖို့၊ အဲလိုမှ မလုပ်ပေးရင်တော့ ကျနော်တို့ လွှတ်တော်က တရားဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေက တင်ပြကြတယ် လေ” လို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ အခုလို ဦးမြင့်လှိုင်အား ဥပဒေအရ အရေးယူဖို့အထိ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက တင်ပြခဲ့ခြင်း ပြဿနာရဲ့ အစကတော့ ၂၀၁၂ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ ၀န်ကြီးဌာနများရဲ့ အသုံးစရိတ်များ ဖြတ်တောက်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အစိုးရ၀န်ကြီးများဘက်က မကျေမနပ် ဖြစ်ခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း ဦးမြင့်လှိုင်က သူ့အမြင်များကို The Hot News ဂျာနယ်ကတဆင့် ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့ရာမှာ လွှတ်တော်အမတ်များကို စော်ကားတဲ့ အသုံးအနှုန်းများ ပါဝင်ခဲ့တဲ့အတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ ထို ဖြစ်စဉ်နောက်ကွယ်မှာ အခြား အကြောင်းတစုံတရာရော ရှိနိုင်ပါသလားလို့ အခုဖြစ်စဉ်နဲ့ ပတ်သက်လို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ ဆက်သွယ် မေးမြန်းခဲ့သူ သတင်းသမားတဦးအား မေးကြည့်ရာ “လွှတ်တော်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမြင် မကြည်လင်တဲ့ ၀န်ကြီးတွေ ရှိသလို လွှတ်တော်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ရဲ့ အစိုးရက အပြည့်အ၀ အကောင်အထည် မဖော်တဲ့အတွက် မကျေနပ်တဲ့ လွှတ်တော်အမတ်တွေလည်း ရှိတယ်။ အဲဒီ အခြေအနေမှာ လွှတ်တော်က ၀န်ကြီးဌာနတွေရဲ့ အသုံးစရိတ်တွေ ဖြတ်တောက်ပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒီလို အသုံးစရိတ် အဖြတ်ခံရတာတွေကို ၀န်ကြီးတွေဘက်က မကျေမနပ် ဖြစ်လိမ့်မယ်။ အဲဒီလို မကျေမနပ်ဖြစ်မှုတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဦးမြင့်လှိုင်က The Hot News နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်းမှာ ပြောလိုက်တယ်။ ဒီတော့ ဒီနေ့ မနက် ပြည်ထေင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးထဲမှာ ဦးမြင့်လှိုင်နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်း ဖော်ပြထားတဲ့ ဂျာနယ်ရဲ့ စာမျက်နှာကို မိတ္တူကူးကာ ဝေငှကြတယ်။ အဲဒီမှာ အမတ်တွေက မကြေမနပ်ဖြစ်ပြီး စုပေါင်း လက်မှတ်ထိုးက ပြည်သူ့လွှတ်တော် အခွင့်အရေး ကော်မတီကို တိုင်တန်းကြတယ်။ တိုင်တန်းသူ အများစုက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေ ဖြစ်ကြတယ်လို့ သိရတယ်“ ဆိုပြီး ပြောပြပါတယ်။ သူက ဆက်လက်ပြီး The Hot News ဂျာနယ်အနေနဲ့ ဦးမြင့်လှိုင်နဲ့ တွေ့ဆုံခြင်းကို အပိုင်း သုံးပိုင်း ခွဲကာ ဖော်ပြဖို့ စီစဉ်ထားကြောင်း၊ သို့သော်လည်း လွှတ်တော်ထဲမှာ အခုလို ပြဿနာတွေ ဖြစ်လာတဲ့အတွက် ထပ်မံ ဖော်ပြမယ့်အပိုင်းများကို ဆက်လက် ပုံနှိပ်ဖို့တော့ မသေချာတော့ကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်က ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ၀န်ထမ်းများအား လစာငွေ တိုးမြှင့်ပေးဖို့ကိစ္စ တင်ပြမှုကို ကနဦးမှာ အစိုးရအဖွဲ့က ပယ်ချခဲ့သလို နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ကော်မရှင်အား အသိအမှတ်ပြုဖို့ကိုလည်း ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ နောက်တခါ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၊ အထူး ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းရဲ့ ၃၁.၃၆၅ ရာနှုန်း၊ အားကစားဝန်ကြီးဌာနလုပ်ငန်းများအနက် လမ်းလယ်ကျွန်းနဲ့ မြေယာရှုခင်း ပြုလုပ်ပေးခြင်း လုပ်ငန်းရဲ့ ၂၀.၂၆ ရာနှုန်း၊ ဇမ္ဗူသီရိ Sport Complex တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းရဲ့ ၂၀.၉၃ ရာနှုန်း၊ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လုပ်ငန်းများအနက် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနလုပ်ငန်းရဲ့ ၂၈.၇၄ ရာနှုန်း၊ စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာနလုပ်ငန်းများရဲ့ ၆၅.၈၉ ရာနှုန်း၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့ ဆေးဝါးနဲ့ စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း၊ မြန်မာ့ ကြွေထည်မြေထည်လုပ်ငန်း၊ အမှတ် ၂ အထွေထွေ အကြီးစား စက်မှုလုပ်ငန်းတို့ရဲ့ ၅ ရာနှုန်း၊ မြန်မာ့ စက်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ စက်မှု စီမံကိန်း ဦးစီးဌာန လုပ်ငန်းများရဲ့ ၁၀၀ ရာနှုန်း၊ အမှတ် ၁ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးရုံး၊ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံရေး ဦးစီးဌာန၊ ရေအားလျှပ်စစ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ဦးစီးဌာန၊ ရေအားလျှပ်စစ်ဓါတ်အား ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်း ၁၀.၄၅ ရာနှုန်း၊ အမှတ် ၂ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးရုံး၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအား ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားလုပ်ငန်း၊ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ဖြန့်ဖြူးရေး၊ ရန်ကုန်မြို့တော် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပေးရေးအဖွဲ့တို့ရဲ့ လုပ်ငန်း ၉.၉၃ ရာနှုန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်သူ့ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ မြို့ရွာနဲ့ အိုးအိမ် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန၊ လမ်းတံတားဦးစီးလုပ်ငန်းတို့ရဲ့ လုပ်ငန်း ၃၀.၁၉ ရာနှုန်း၊ ရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာ့မီးရထားလုပ်ငန်းများရဲ့ ၇.၉ ရာနှုန်း စသည်ဖြင့် အသုံးစရိတ် ဖြတ်တောက်ရေးအတွက် ၂၀၁၂ - ၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် အမျိုးသား စီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ၂၊ ဥပဒေကြမ်းရဲ့ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ၂၀၁၂၊ မတ်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ The Hot News ဂျာနယ်ကို ဖတ်ကြည့်ရာမှာ ဦးမြင့်လှိုင်ရဲ့ ပြောဆိုချက်များတွင် ပါဝင်တဲ့ - ဒီ စပ်ကူးမတ်ကူးအချိန်မှာ အစိုးရအဖွဲ့ကို မတည်ငြိမ်အောင် လုပ်တာတွေက အချိန်တန်ရင် လူတွေက Brain ရှိတာပဲ၊ အချိန်တန်ရင် သူ့ဟာနဲ့ သူ သိလာမှာပဲ။ - ဒီလို ပြောလို့ရှိရင် ဒီနေ့ လွှတ်တော်ကြီးကို ဆောက်ထားတဲ့ တန်ဖိုးကလည်း တိုင်းပြည်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ မရှိဘူးလား၊ အဲဒီလိုပေါ့၊ ရှေ့တုန်းက ဘုရားပုထိုးကြီးတွေ တည်ထားတဲ့ လူတွေကြောင့်မို့လို့ ပုဂံဆိုတာ မြန်မာ့ဂုဏ်ကိုဆောင်တာပေါ့။ ဒါ ရှေ့လူကြီးတွေ တည်တာ ပေါ့။ အဲဒီတုန်းက ဒီလိုပဲ ငါတို့ ဒီလောက် ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံ ဘုရားစေတီတွေပဲ တည်ရလားဆိုပြီး အပြစ်သွားပြောလို့ ဘယ်ရမလဲ၊ သမိုင်းရဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်တွေအဖြစ် ထိန်းသိမ်းထားခဲ့လို့ ဒီနေ့ ဗမာဟေ့ဆိုတဲ့ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာ အမွေအနှစ်တွေကို စောင့်ရှောက်နိုင်တာပေါ့။ အဲဒီလို ဝေဖန်တဲ့သူတွေက တအား မိုက်ရိုင်းလွန်းအားကြီးတာပေါ့ နော်။ မိုက်ရိုင်းတာ မခံနိုင်လို့ ရှင်းပြရတာပါ။ - ဘာ့ကြောင့်လဲ အခြေခံဖြစ်တဲ့ ဒေသအသီးသီးက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီး ရောက်လာတဲ့လူက စာမှ မတတ်၊ ဆယ်တန်းမှ မအောင်ဘဲ လွှတ်တော်ထဲ လာထိုင်တော့ သူများ ထ ဆို မတ်တပ်ထ နေတယ်။ ထိုင်ဆို ထိုင်နေတယ်။ သူများ ခလုပ်နှိပ်ဆို နှိပ်တယ်။ သူမှ ဘာမှ မသိတာ။ ဘာတွေ ပြောနေလဲ သူ နားလည်တာ မဟုတ်ဘူး။ ရမ်းလုပ်နေရတာ။ အဲဒီဟာတွေကို ဒေသအလိုက် နယ်ပယ် အသီးသီးက ပညာတတ်တွေ ထွက်ပေါ်လာအောင်ဆိုပြီး လုပ်ပေးခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အချိန်က ယူရဦးမယ်။ သူငယ်တန်းက စပြီး train လုပ်နေရတာ။ - မကောင်းဘူးလားဆို အခု ပြောနေကြတာ၊ ဝေဖန်နေတာတွေဟာ ကောင်းပါတယ်။ သို့သော် ပျက်လောက်အောင်တော့ မဖြစ်ရဘူး။ တိုင်းပြည် ထိခိုက်သွားအောင်တော့ မဖြစ်သင့် မလုပ်ရဘူး။ အစိုးရပျက်အောင် လုပ်တယ်။ တိုင်းပြည်ပျက်အောင် လုပ်တယ်ဆိုတာတွေ ဒီလှေကြီးထဲမှာ ခရီးသွားတဲ့ လူတွေ လှေဝမ်းကြီး ပေါက်သွားတယ်ဆိုရင် အကုန် နစ်မှာ။ - ဥပဒေက ကမောက်ကမ ဖြစ်နေရင် အစိုးရကိုပဲ ဝေဖန်နေမယ်။ အထဲမှာ ရှိတဲ့ မီဒီယာတွေအနေနဲ့ကလည်း အစိုးရကို ၀ိုင်းပြီး သမနေရင် ကမောက်ကမဖြစ်ပြီး လှေကြီးနစ်တဲ့အခါကျရင် ဘယ်သူက အရင်ဆုံးနာမလဲ။ ပြည်သူက အရင်ဆုံး နာမယ်။ တလှေထဲ စီး၊ တခရီးထဲ သွားဆိုတာ တဖွဖွနေရတယ်ဆိုတာ အဲဒါပဲ။ လှော်တဲ့ကောင်ကလည်း လှော်ရမယ်။ ထိုင်တဲ့ကောင်ကလည်း ငြိမ်ငြိမ်ကလေး ထိုင်။ အသက်ကြီးပြီဆိုရင် ငြိမ်နေရမယ်။ ငြိမ်ငြိမ်လေး မထိုင်ဘဲ အသားကုန် ဟိုလှုပ် ဒီလှုပ်ရင် ဒါကြောင့်လဲ ဘုန်းကြီးအရူးနဲ့ လှေလူးလို့ ပြောတာ။ - တည့်တည့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ အစိုးရအဖွဲ့ ၀န်ကြီးတွေအနေနဲ့က သက်သာတယ်။ အလုပ်က ပေါ့သွားတယ်။ အော် - ငါတို့ ဆယ်ခုလုပ်ဖို့ ရှိနေတာ တခုပဲ လုပ်နိုင်တော့ တခုပဲ သက်တောင့်သက်သာလေး ပေါ့။ အမှန်ကတော့ သက်သာတယ်။ သို့သော် တိုင်ပြည်သူ့အပေါ်မှာ တာဝန်ကျေချင်တဲ့သူကျတော့ မခံနိုင်ဘူး ပေါ့။ ငါတို့ တိုးတက်အောင် လုပ်ရမယ့်ကာလမှာ ငွေအား၊ လူအား အရမ်း အရေးကြီးတယ်။ နည်းပညာရှင်တွေရော အကုန်လုံးပေါ့။ အဲဒီလို လိုနေတဲ့အချိန်မှာ တဖက်ကို ဖိထားရင် မတိုးတက်နိုင်ဘူးပေါ့။ နာတာကတော့ ပြည်သူပဲ နာတာ။ တည့်တည့် ပြောရရင် အစိုးရ၀န်ထမ်းတွေက သက်သာပါတယ်။ ဆိုတဲ့ ပြောဆိုချက်များဟာ လွှတ်တော်အမတ်တွေရဲ့ အသုံးစရိတ်ဆိုင်ရာ ဆုံးဖြတ်ချက်များအပေါ် အတော့်ကို မကျေမနပ် ဖြစ်နေတဲ့ ပြောဆိုချက်တွေ ဖြစ်ဟန်တူပါတယ်။ မြန်မာစစ်ဗိုလ်ချုပ်များအနေနဲ့ စစ်ဘက်ရာထူးများကို စွန့်လွှတ်ပြီး အစိုးရ၀န်ကြီးများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ် ရာထူး ရယူခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်း ၀န်ကြီးများရဲ့ အပြောအဆိုများနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ခံရမှုတွေ ရှိနေရာ လျှပ်စစ်ဝန်ကြီး ဦးဇော်မင်းရဲ့ မြစ်ဆုံရေကာတာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ပြောကြားချက်နဲ့ အခု လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်တို့ရဲ့ ပြောကြားချက်များဟာ အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ လွှတ်တော်အတွင်း သိသိသာသာ သတိထားခံရတဲ့ ပြောကြားချက်များ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်ကြားရေးနဲ့ ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီး ဦးကျော်ဆန်းဟာလည်း သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတခုမှာ မြစ်ဆုံရေကာတာစီမံကိန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး မေးမြန်းခံရစဉ် စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။ ဦးမြင့်လှိုင်ဟာ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ဖွံဖြိုးရေးပါတီရဲ့ ကြပ်ပြေးနေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိ မြို့နယ် ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ် တဦးလည်း ဖြစ်ပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဖြစ်နေလေတော့ ဦးမြင့်လှိုင်ရဲ့ ပြောကြားချက်များဟာ ပါတီရဲ့ သိက္ခာကို ကျဆင်းစေတယ်၊ လွှတ်တော်နဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို ပြည်သူတွေ အကြည်ညို ပျက်အောင် လုပ်တဲ့အတွက် လွှတ်တော် သိက္ခာကျသလို၊ နိုင်ငံလည်း သိက္ခာကျတယ်လို့ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ရေဖြူမြို့နယ် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းဦးက ဗီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ The Hot News အား ဦးမြင့်လှိုင် ပြောဆိုခဲ့တဲ့ အချက်များဟာ လွှတ်တော်နှစ်ရပ်စလုံးအတွင်း အတော်လေး အုတ်အော်သောင်းနင်း ဖြစ်သွားလေတော့ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် နာယက ဦးခင်အောင်မြင့်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းတို့ ဘယ်လို ကိုယ်တွယ် ဖြေရှင်းမလဲဆိုတာကတော့ စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းနေပါတယ်။
ကိုးကား လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင် နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း (The Hot News ဂျာနယ် အတွဲ ၂၊ အမှတ် ၈၄၊ စာမျက်နှာ ၂၀၊ ၂၁) Read More
လယ်/ဆည်ဝန်ကြီး လွှတ်တော်ကိုတောင်းပန်ရန် အမတ်များတောင်းဆို
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဌာနအတွက် ဘတ်ဂျက်ဖြတ်တောက်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ လယ်ယာ စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အပေါ် ပုတ်ခတ် ပြောဆိုထားတာကို အရေးယူ ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက လွှတ်တော် အခွင့်ရေးကော်မတီကို စုပေါင်း တိုင်ကြားထားပါတယ်။
မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ထုတ် Hot News ဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အင်တာဗျူးအတွင်း လယ်/ဆည် ၀န်ကြီးရဲ့ ပြောဆို ချက်တချို့ဟာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့သိက္ခာကို ထိခိုက်စေတယ်ဆိုပြီး မကျေမနပ် ဖြစ်ကြတာဖြစ်သလို ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီကိုလည်း ထိခိုက်မှု ရှိတယ်ဆိုတဲ့ ဝေဖန်ချက်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။ ဒီအခြေအနေအပြည့်အစုံကိုတော့ မသင်းသီရိက တင်ပြပေးထားပါတယ်။
၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဌာနအပေါ် ဘတ်ဂျက်ဖြတ်တောက်မှုနဲ့ ပတ်သက်လို့ မတ်လ ၂၃ ရက်နေ့၊ သောကြာနေ့ထုတ် Hot News ဂျာနယ်ထဲမှာ လယ်/ဆည်ဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်နဲ့ အင်တာဗျူး ဖော်ပြထားတာပါ။
ဒီတွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းထဲမှာ ဘတ်ဂျက်အဖြတ်ခံရတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ ၀န်ကြီးဦးမြင့်လှိုင်ရဲ့ ပြောဆိုသုံးနှုန်းချက် တချို့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို ထိခိုက်မှုတွေပါတယ်ဆိုပြီး ဒီကနေ့မနက် အင်တာဗျူးပါတဲ့ ဂျာနယ်ရဲ့ စာမျက်နှာကို မိတ္တူကူးကာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးထဲမှာ ဝေငှတာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်၊ ဒါကို ဖတ်ရတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေလည်း မကျေမနပ်ဖြစ်ကြပြီး စုပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးကာ လွှတ်တော် အခွင့်အရေးကော်မတီကို ဒီကနေ့ ညနေက တိုင်ထားတယ်လို့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီရဲ့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဖေသန်းက ပြောပြပါတယ်။
“လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေ အဓိက မကျေမနပ်ဖြစ်တဲ့ စကားစုတွေကတော့-
လယ်တစ်ဧကထဲကို ရေရောက်ဖို့ သိန်းဘယ်လောက်ကုန်တယ်ဆိုတာ၊ အဲဒီဈေးတွက်တွက်နည်းနဲ့ တွက်တာ သက်သက် အပြစ်တင်ဖို့ ဝေဖန်တာပဲ။ ဒါ-ဦးနှောက်မရှိတာပေါ့၊ ရှိရက်သားနဲ့ သက်သက် Negative ဆန်တာပေါ့၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆိုပြီး စာမှမတတ်၊ ဆယ်တန်းမှမအောင်ဘဲ။ လွှတ်တော်ထဲကို လာထိုင်နေတော့ သူများက ထဆို ထမယ်။ ထိုင်ဆိုရင်ထိုင်မယ်။ သူများက ခလုတ်နှိပ်ဆို နှိပ်တယ်။ သူကမှ မသိတာ၊ ဘာတွေပြောနေလဲ၊ သူကမှ နားမလည်တာ။ ရမ်းပြီး လုပ်နေတာ။ လှော်တဲ့ ကောင်ကလည်း လှော်ရမယ်။ ထိုင်တဲ့ကောင်ကလည်း ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်၊ အသက်ကြီးပြီဆိုရင် ငြိမ်နေရမယ်။ ငြိမ်ငြိမ်လေးမထိုင်ဘဲ အသားကုန် ဟိုလှုပ် ဒီလှုပ်၊ လှုပ်နေရင်တော့ ဒါ ဘုန်းကြီးရူးနဲ့ လှေလူးနဲ့...
လို့ ပြောတာ….အဲဒါ၊ အဲဒီအပိုဒ်တွေပေါ့ဗျာ၊ အဲဒီအပေါ်မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက တော်တော့်ကို မကျေနပ်ဖြစ်ပြီးတော့ လွှတ်တော်ထဲမှာ ရုတ်ရုတ်သဲသဲဖြစ်သွားတာဗျာ့၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အခွင့်အရေးကော်မီတီကို နိုင်ငံတော်ပိုင် သတင်းစာ၊ ရုပ်မြင်သံကြားတို့ကနေ တရားဝင် ၀န်ချတောင်းပန်ဖို့၊ အဲလိုမှ မလုပ်ပေးရင်တော့ ကျနော်တို့ လွှတ်တော်က တရား ဥပဒေအရ အရေးယူ ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တွေက တင်ပြကြတယ်လေ။”
ဦးမြင့်လှိုင်ဟာ နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိ မြို့နယ် ကြံ့ခိုင်ဖွံဖြိုးရေးပါတီရဲ့ ရွေးကောက်ခံ ကိုယ်စားလှယ် တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သလို ပြည်ထောင်စု လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးနဲ့ ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၀န်ကြီး အဖြစ်လည်း လက်ရှိ တာဝန်ယူထားတာပါ။ အခုလို ၀န်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်ရဲ့ ပြောဆိုချက်တွေဟာ ကြံ့ခိုင်ဖွံဖြိုးရေးပါတီကို ဂုဏ်သိက္ခာကျစေပြီး လွှတ်တော်ထဲမှာ ရှိနေကြတဲ့ ကြံ့ခိုင်ဖွံဖြိုးရေးပါတီရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပါ ထိခိုက်နေတယ်လို့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးပါတီရဲ့ ရေဖြူမြို့နယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဝင်းဦးကလည်း ပြောပါတယ်။
“အထူးသဖြင့် ဒီလိုကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတဲ့ အချိန်မှာ ကျနော်တို့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အနေနဲ့လည်း အနိုင်ရအောင် ကြိုးစားတာပါပဲ။ လောလောဆယ် ကျနော်တို့ လွှတ်တော်ထဲမှာ အများစုသော ကိုယ်စားလှယ်များဟာ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီက ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ စည်းရုံးရေးဆင်းတဲ့ နေရာမှာ ကျနော်တို့အားလုံးကို ထိခိုက်နစ်နာစေပါတယ်။ ပြည်သူတွေက လွှတ်တော်ကို အယုံအကြည်ပျက်အောင်၊ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကို အယုံအကြည်ပျက်အောင်၊ လုပ်ခဲ့တာသည်လည်းပဲ လွှတ်တော်သိက္ခာကျသလို နိုင်ငံလည်း သိက္ခာကျပါတယ်။ ကျနော်တို့ ပါတီလည်း သိက္ခာကျပါတယ်။”
Hot News ဂျာနယ်ထဲမှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ ဒီအင်တာဗျူးထဲမှာ မေးမြန်းသူ သတင်းသမားဘက်က အသုံးအနှုန်းတခုနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း အမျိုးသားဒ်ီမိုကရေစီအင်အားစု NDF ပါတီက ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးဝင်း ပြောတာက-
“ဂျာနယ်မှာ ဗျူးထားတဲ့အပိုင်းမှာက မေးတဲ့လူက မေးထားတာက လွှတ်တော်ထဲမှာ အတိုက်အခံ ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုတွေက ဆိုတော့- တကယ်ဆိုတော့ လွှတ်တော်မှာလည်း အတိုက်အခံဆိုတာ ကျနော်တို့ကို မပေးသုံးတော့ပါဘူး၊ မသုံးပါနဲ့။ အတိုက်အခံဆိုတဲ့ သဘောမထားပါနဲ့။ အားလုံး လက်တွဲလုပ်ကြရအောင်ပါလို့ သမ္မတကလည်း ပြောထားတယ်။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကလည်း ပြောထားတယ်။ နောက်တခုကလည်း ကျန်တဲ့ဟာက ဒီမိုကရေစီအင်အားစု မဟုတ်ဘူး ဆိုတာမျိုး သွားပြီးသက်ရောက်နေတယ်။”
NDF ပါတီက ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးဝင်းပါရှင်။ ဘတ်ဂျက် ၆၅ ရာခိုင်နှုန်း အဖြတ် ခံထားရတဲ့ ၀န်ကြီးဌာနတစ်ခုအနေနဲ့ အများပြည်သူ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ဘယ်လို ရပ်တည်ပြီး ဘယ် စီမံကိန်းတွေ ဆက်လုပ်ဖို့ ရပ်ပစ်ဖို့ ဆိုတဲ့အပေါ် တင်ပြချင်တာကြောင့် ဖြစ်ပြီး ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုးဝင်း ထောက်ပြခဲ့တဲ့ အသုံးအနှုန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လယ်/ဆည်ဝန်ကြီး ဦးမြင့်လှိုင်နဲ့ အင်တာဗျူးကို ကိုယ်တိုင် မေးမြန်းခဲ့သူလည်းဖြစ် Hot News ဂျာနယ်ရဲ့ အယ်တီတာချုပ်လည်း ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ဟေမာ ခေါ် မမ က- အခုလို VOA မြန်မာပိုင်းကို ရှင်းပြပါတယ်။
“ပြည်ခိုင်ဖြိုးက တက်တဲ့ အမတ်တွေရှိတယ်။ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုကနေ တက်တဲ့ အမတ်ရှိတယ်။ အမတို့ ဂျာနယ်တွေက အင်တာဗျူးသွားရင် ဒီမိုကရေစီအင်အားစု အမတ်တွေကသာ အမတို့ စာနယ်ဇင်းတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဖြေကြားလေ့ရှိပါတယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးဘက်ကနေ လက်ရှိ in service တို့၊ အဲလိုမျိုးဘက်ကနေ ဖြစ်လာတဲ့ အမတ်တွေဟာ မဖြေကြဘူးညီမလေး၊ မဖြေတဲ့အတွက် အမတို့လည်း မေးရတာအခက်အခဲရှိပါတယ်။
အဲဒီအတွက် အတိုက်အခံပါတီလို့ အမပြောတဲ့ဟာက လက်ရှိ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကနေ မူဝါဒပြောင်းခဲ့တာ ဘယ်သူတွေက အတိုက်အခံပြုခဲ့ကြတာလဲ၊ အဲဒီအတွက် ၀န်ကြီးဌာနတခုမှာ ၀န်ကြီးတယောက်နဲ့ မေးတဲ့အခါမှာ ဘတ်ဂျက်ကိစ္စကို ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် အော်နေတယ်လို့ အမက မေးရပါတယ်။ အမက စာနယ်ဇင်းသမား၊ သတင်းသမားဆိုတဲ့ အတွက် မေးတဲ့နေရာမှာ ကွဲကွဲပြားပြားမေးရပါတယ်။ အဲဒီသဘောနဲ့ သုံးနှုန်းခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။”
Hot News ဂျာနယ်ရဲ့ အယ်တီတာချုပ်လည်း ဖြစ်တဲ့ ဒေါ်ဟေမာခေါ် မမ ပြောခဲ့တာပါရှင်။ ရှေ့ဘဏ္ဍာနှစ်အတွင်း ၀န်ကြီးဌာနတွေကို ဘတ်ဂျက်ဖြတ်တာတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတ္ထုတွင်း ၀န်ကြီးဌာနကလည်း အပတ်စဉ်ထုတ် The Voice Journal ကို မမှန်မကန်ရေးသားတဲ့ အတွက်ဆိုပြီး တရားစွဲဆိုထားတာတွေလည်း ရှိပါတယ်။
Karen refugees among 14 homeless after Ottawa fires
Four people were left homeless after escaping an early morning fire that broke out on Mockingbird Drive in Orleans at about2a.m. Wednesday. (CBC)
An extended family of eight Karen refugees from Burma were among 14 people left homeless after two separate fires early Wednesday morning, one in Centretown and the other in Orléans.
The most recent blaze, believed to have started just before6a.m. inashed behind 226 Rochester St., forced the family andacouple living upstairs from their home.
All 10 tenants were being set up with hotel accommodations, and none has insurance. Messier said it was not immediately clear if the Rochester home could be salvaged. Firefighters estimated the damage at about $350,000.
Finola Shanahan lives with her partner Colin Raines on the upper level. Shanahan told CBC News she was woken up by pounding and yelling at about 5:45 a.m. She and Raines didn't have time to get their coats.
"I saw the family downstairs bringing their whole family, the baby and things onto the street," Raines said. "So I woke Finola up and we got the dog and left."
Witnesses saw flames shooting up the back of the house.
Jeff Meyer, who lives across the street, ran outside with his camera when he heard the sirens.
'' I saw the smoke billowing out of the windows," he said. "It was just coming out everywhere."
Fourteen people are homeless after two fires broke out early Wednesday morning in Ottawa, this one in Centretown on Rochester Street and the other in Orleans. (Submitted by Jeffrey Meyer)
Karen family came to Ottawa in 2009The family — made up of two grandparents, their daughter, two sons, their sons' wives and one four-month-old baby — came to Ottawa in 2009 as refugees after their village was attacked by Burmese militia.
Ottawa is home to about 300 Karen. They fled the military regime in Burma, or Myanmar, where the Karen people make up seven per cent of the population, the largest minority ethnic group.
The eldest son hasapart-time job, but all of them are ESL students studying at the nearby Adult High School on Gladstone.
The Red Cross is putting up the families in both of the building's units at the Cartier Suites Hotel — but the Karen family is also hoping to apply for emergency housing through the city of Ottawa. The Ottawa Community Immigrant Services Organization said donations for the family can be made through them at nandrew@ociso.org.
Four homeless after earlier Orléans blazeEarlier Wednesday morning,adetached home was destroyed and three people were treated for smoke inhalation afterafire broke out at 352 Mockingbird Dr. in Orléans, near Tenth Line Road.
The fire started at about2a.m. in the basement of the detached home, firefighters said.
One person was living in the basement while the other three lived upstairs, Messier said, and all four managed to escape.
The three people upstairs were woken by the smoke alarms. A couple sharingaroom was forced to get out throughabedroom window because the smoke in the hallway was too thick.
Damage was estimated at about $400,000 and the cause is under investigation.
Residents of the neighbouring townhouse were only temporarily displaced due to damage, Messier said.
ACR News (18.03.12)
မ၀ံမရဲနဲ့ ရေးလိုက်တယ် (မန်းပစ်တိုင်းထောင်)
Mahn Pit Tine Htoung
အစိုးရတပ်အား ပြန်လည်တုံ့ပြန်မည်ဟု သျှမ်းတပ်မှူးပြော
သျှမ်းပြည်အရှေ့ပိုင်း မိုင်းယောင်းမြို့နယ် အတွင်းရှိ သျှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS/SSA ၏ တပ်စခန်းတခု အား အစိုးရတပ် တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်သောကြောင့် ထိထိရောက်ပြန်လည်တုန့်ပြန်သွားမည်ဟု သျှမ်းတပ်မှူးတဦးက ဆိုသည်။
“မနေ့ကမနက် ၇ နာရီလောက်က ကျနော်တို့တပ်စခန်း ကို တက်သိမ်းတာ အစိုးရတပ် ခမရ ၅၇၃ ဘဲလေ။ တိုက်ပွဲဖြစ်တာ မိနစ် ၄၀ လောက်ကြာတယ်။ ကျနော်တို့ဖက်ကတော့ သဘောတူညီချက်ထဲကအတိုင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ခုခံကာကွယ်တာဘဲရှိမယ်။ စခန်းပြန်ရဖို့ အဓိက မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် ဒီတိုင်းဆက်ဖြစ်သွား မယ်ဆိုရင် တော့ ကျနော်တို့ သျှမ်းပြည်တခုလုံးမှာလှုပ်ရှားနေတော့ တခြားနေရာမှာ ထိထိ ရောက် ပြန်လည်တုန့်ပြန်သွားမယ်” - ဟု ကျိုင်းတုံစစ်ဒေသ တပ်မှူးကြီးက ပြောပါသည်။
မတ်ခ်ျ ၁၈ ရက် မနက် ၇ နာရီ ကျော်အချိန် သျှမ်းပြည်တပ်မတော် တပ်ရင်းအမှတ် ၁၀၈ နှင့် မြန်မာအစိုးရ တပ် ခမရ ၅၇၃ တို့ မိုင်းယောင်းမြို့နယ် နှင့် တချီလိတ်မြို့နယ်အကြား လွယ်လန့်ဖှာ့ဟင်ချို အနောက် မြောက် ဘက်တောတွင်းတနေရာ၌ တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
“ပြီးခဲ့တဲ့အပတ် စနေနေ့တုန်းက မထင်မှတ်ဘဲ အစိုးရတပ် ခမရ ၅၇၃ က အင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ ကျနော် တို့တပ်စခန်းကိုတက်တိုက်တယ်။ ကျနော်တို့ ရှောင်တိမ်းပေးလိုက်ရတယ်။ အခု တိုက်ပွဲဖြစ်တာလဲ အဲဒီ တပ်နဲ့ဘဲ။ တောတွင်းတနေရာမှာဘဲဖြစ်တာ။ ကျနော်တို့ဘက်တော့ အကျအဆုံးမရှိဘူး။ အစိုးရတပ်ဘက် ကတော့မသိဘူး” - ဟု ဆက်၍ ပြောပြပါသည်။
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနှင့် နီးစပ်သည့် အမည်မဖေါ်လိုသူ ဒေသခံတဦးက - အဆိုပါတိုက်ပွဲတွင် အစိုးရတပ် ဘက် တစ်ဦးထက်မနည်းဆုံးကျဆုံးပြီး ၃ ဦးဒဏ်ရာရှိကြောင်း ပြောပါသည်။
၂၀၁၁ ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက်နေ့ ပဏာမ အဆင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီး နောက်ပိုင်း အစိုးရတပ် နှင့် သျှမ်းပြည်တပ် မတောင်တောင်ပိုင်းတပ်ဖွဲ့ခေါ် RCSS/SSA တို့ တိုက်ပွဲ ၁၄ ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
ခလရ တပ်ရင်း (၁၃၀) ကင်းစောင့်သည့် စစ်သားများမှ အပြစ်မဲ့သည့် ရွာသားနှစ်ဦးသတ်ပစ်
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ ကျောက်မဲခရိုင်၊ မန်တုန်မြို့နယ်၊ မန်တုန်အခြေစိုက် မြန်မာစစ်တပ် ခလရ တပ်ရင်း(၁၃၀)မှ ဒုတပ်ရင်းမှူး ဦးမျိုးမြင့်အောင်နှင့် ဗိုလ်မှူးကြီးဦးအောင်မြင့်ဦးတို့ ဦးဆောင်သော ကင်းစောင့်သည့်စစ်သားများသည် မိုးလုံကျေးရွာနှင့် မိုးနွဲ့ကျေးရွာနေ ရွာသားနှစ်ဦးအား ည (၈) နာရီအချိန် လယ်ယာသို့ပြန်လာစဉ်တွင် မည်သည့်မေးမြန်းမှုမှ မရှိဘဲ သတ်ပစ်လိုက်သည်ဖြစ်ရပ်အား မတ်လ၊ ၁၃ ရက်နေ့၊ ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်ဟု သိရှိရပါသည်။
ထိုအတောအတွင်းတွင် ခလရ တပ်ရင်း (၁၃၀)မှ စစ်သားများ ရှေ့တန်းထွက်နေသည့်အချိန်ဖြစ်သည့်အပြင် ဤဒေသတ၀ိုက်တွင်လည်း မြန်မာစစ်တပ်၊ ကချင်စစ်တပ်နှင့် ရှမ်းစစ်တပ်တို့ ခိုအောင်းနေသည့်နေရာဖြစ်ပြီး အမည်းရောင်နယ်မြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားသည်။ ရွာသူ၊သားများအား ညဘက်ဖက်တွင် အပြင်မထွက်ရန်လည်း ရွာဥက္ကဌမှ သတိပေးထားပါသည်။
နယ်ခံ ခြိူဝ်းဆငီးအဖွဲ့မှ ပြောပြချက် ”ဦးအိုက်စိန်နဲ့ဦးအိုက်ရှူးတို့နှစ်ယောက်က ရွာမှာ ညဘက်အပြင်မထွက်ဖို့ ရွာဥက္ကဌ သတိပေးထားတာကို မသိဘူး။ အဲတာနဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်က ည(၈)နာရီမှ လယ်ယာကနေပြန်လာတော့ ရွာအ၀င်မှာဘဲ တပ်ရင်း(၁၃၀)က ကင်းစောင့်တဲ့ စစ်သားအဖွဲ့တွေနဲ့တိုးတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ဘာမှမေးမြန်းတာမရှိဘူး။ ချက်ချင်း သတ်ပစ်လိုက်တယ်။
အမည်းရောင်နယ်မြေသတ်မှတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ ကင်းစောင့်တဲ့ အဖွဲ့တွေကလည်း စိုးရိမ်တာပေါ့။ ဘယ်ကလူမှန်းမသိတော့ ချက်ချင်းသတ်လိုက်တယ်။ ဦးအိုက်စိန်က သူ့ရဲ့ညာဘက်နားရွက်နဲ့ ရင်ဘက်ကိုထိတယ်။ ဦးအိုက်ရှူးကတော့ ညာဘက်မျက်စိကိုထိပြီး ပေါက်သွားတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး ပွဲချင်းပြီးသေတယ်။ ပြီးတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို စစ်တပ်က မိုးလုံရွာနားမှာဘဲ မြုပ်လိုက်တာ။ ကင်းစောင့်တဲ့နေရာနဲ့ သတ်ပစ်လိုက်တဲ့နေရာက ဂိုက်နှစ်ရာလောက်ဘဲကွာတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်က အဲဒီညမှာ အိမ်မပြန်လာကြဘူး။ ပြီးတော့ ညဖက်မှာ သေနတ်သံလည်းကြားထားတယ်။ မနက်ရောက်တော့ အမျိုးတွေက အဲဒီနေရာကိုသွားကြည့်ကြတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက် အသတ်ခံရတယ်”
ဤကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကျောက်မဲခရိုင်မှူး လာရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ခံရသူနှစ်ဦးအား လျှော်ကြေး ဆယ်သိန်းဆီပေးပြီး ကျေအေးခိုင်းသည်။ ပစ်သတ်သည့် စစ်သား၊ ဦးဆောင်သည့် ခေါင်းဆောင်ကို အပြစ်ပေး အရေးယူဆောင်ရွက်မှု ရှိမရှိ မသိရဘဲ အပြစ်ပေးလျှင် လက်အောက်ငယ်သားကိုသာ အပစ်ပေးလောက်သည်ဟု ခြိူဝ်းဆငီးအဖွဲ့ (လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှု စုံစမ်းသည့်အဖွဲ့) ၀င်တစ်ဦးမှ မှတ်ချက် ပေးသွားပါသည်။
”စစ်တပ်ကလည်း သူတို့သတ်တာကို ၀န်ခံတယ်။ လျှော်ကြေး တစ်ယောက်ကို ဆယ်သိန်းပေးပြီးတော့ ကျေအေးခိုင်းလိုက်တယ်။ ဒါပေမဲ့ ခံရတဲ့သူဘက်က ကျေနပ်မှုရှိမရှိကို သူတို့ မမေးမြန်းဘူး။ ကျနော်တို့တတွေက မကျေနပ်ဘူးလို့လဲ မပြောရဲဘူး။
စစ်တပ်ကိုလဲ ကြောက်နေရတဲ့အပိုင်းတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ပစ်သတ်တဲ့ စစ်သား ခေါင်းဆောင်တွေကို ကျောက်မဲခရိုင်မှူးတွေက အပစ်ပေးအရေးယူ ဆောင်ရွက်မှုတွေ ရှိမရှိတော့ ကျနော်တို့ မသိဘူး။ ထင်တာတော့ စစ်တပ်အချင်းချင်းဆိုတော့ အပစ်ပေးရင်တော့ လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုပဲ ပေးမယ်ထင်တယ်”
၂၀၁၁ခုနှစ် ဧပြီလမှစပြီး မန်တုန်ဒေသတ၀ိုက်တွင် ရှမ်းစစ်တပ်၊ ကချင်စစ်တပ်၊ တအာင်းအမျိုးသားလွှတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နှင့် မြန်မာစစ်တပ်တို့ကြား စစ်ပွဲများ မကြာခဏဖြစ်ပွားလျှက်ရှိပြီး မြန်မာစစ်တပ်မှ ရွာသူ၊ရွာသားများအပေါ် ယခုလိုမတရားမှုများ မကြာခဏကျူးလွန်ခဲ့သည်။
ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ကို နှောင်ကြိုးမဲ့ လွှတ်ပေး
မျိုးသန့် | တနင်္လာနေ့၊ မတ်လ ၁၉ ရက် ၂၀၁၂ ခုနှစ် ၁၀ နာရီ ၅၂ မိနစ်
ချင်းမိုင် (မဇ္ဈိမ) ။ ။ အင်းစိန်ထောင်အတွင်း ထောင်ဒဏ် တသက်တကျွန်းကျခံနေရသည့် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး KNU ဗဟိုကော်မတီဝင် ဖဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ကို သမ္မတ၏ ညွှန်ကြားမှုဖြင့် တနင်္ဂလာနေ့ နံနက်တွင်
နှောင်ကြိုးမဲ့ လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဟု KNU နှင့် အစိုးရတို့အကြား ငြိမ်းချမ်းရေး အကျိုးဆောင် ဦးညိုအုန်းမြင့်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“မနက် ၇း၃၀ မှာ အင်းစိန်တရားရုံးကနေပြီးတော့ တရားဝင် လွှတ်ဖို့အတွက် သမ္မတရဲ့ အမိန့်စာကို တရားသူကြီးက ဖတ်ပြပြီးတော့ သူ့ကို နှောင်ကြိုးမဲ့ လွှတ်ပေးခြင်းနဲ့ လွှတ်ပေးလိုက်ပါပြီ။” ဟု ဦးညိုအုန်းမြင့်က ပြောသည်။
သမ္မတ၏ ညွှန်ကြားချက်ကို သမ္မတရုံး တာဝန်ခံ ဗိုလ်မှူးကြီး ချစ်ကိုကိုမှ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ပေးပို့ခဲ့ပြီး ဖဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ကို လွှတ်ပေးရန် အမိန့်စာကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုကိုမှ လက်မှတ်ထိုး ထုတ်ပြန်သည်ဟုလည်း ဦးညိုအုန်းမြင့်က ပြောသည်။
ယခုအချိန်တွင် ဖဒိုမန်းငြိမ်းမောင်သည် သမ္မတရုံးတာဝန် ဗိုလ်မှူးကြီး ချစ်ကိုကို၏ ဖိတ်ကြားမှုဖြင့် နေပြည်တော်သို့ သွားရောက်နေသည်ဟုလည်း ဦးညိုအုန်းမြင့်က ပြောသည်။ “အခု နေပြည်တော်ကို သွားနေပါတယ်။ သူ့ကို အထူး ဖိတ်ကြားချက်အရ အထူးဧည့်သည်တော် အဖြစ် KNU ငြိမ်းချမ်းရေး အတွက်ပါ။ သူနဲ့လည်း တိုင်ပင်ချင်တယ်ပေါ့နော်။ ဟိုဘက်က Idea လည်း သူတို့ သိချင်တယ်ပေါ့။” ဟု ဦညိုအုန်းမြင့်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဖဒိုမန်းငြိမ်းမောင်သည် နေပြည်တော်တွင် KNU နှင့် အစိုးရကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ နယ်စပ်ရေးရာ ဝန်ကြီး ဦးခင်ရီ၊ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း တို့နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးရန် ရှိသည်ဟု လည်း သိရသည်။
အသက် ၇၀ ရှိ ဖဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ကို သူ၏ မိခင်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော KNU သို့ ယခုလ ၂၄ ရက်နေ့တွင် မြဝတီမြို့၌ ပြန်လည် အပ်နှံမည်ဖြစ်သည်ဟုလည်း ငြိမ်းချမ်းရေးအကျိုးဆောင် ဦးညိုအုန်းမြင့်က ပြောသည်။
ဖဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ကို အင်းစိန် မြောက်ပိုင်းခရိုင် ဒုတိယခရိုင်တရားသူကြီး ဦးလှဝင်းက အင်းစိန်ထောင်တွင်း အထူး တရားရုံး ဖွဲ့၍ မတရားသင်း ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၇ (၁) အရ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်၊ နိုင်ငံတော် အစိုးရအား လက်နက်စွဲကိုင် ပုန်ကန်မှုပုဒ်မ ၁၂၂ (၁) အရ တသက်တကျွန်း ချမှတ်ပြီး စီရင်ချက် နှစ်ခုကို တပေါင်းတည်း ကျခံရမည်ဟု ယခုလ
၁၃ ရက်နေ့တွင် အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
သူသည် ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၄ ရက်နေ့ လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံ ကူမင်းမြို့မှ ရန်ကုန်မြို့သို့ ရောက်ရှိလာပြီး နိုင်ငံကူးလက်မှတ် တံဆိပ်တုံးအတု ရိုက်နှိပ်ထားသည်ဟုဆိုကာ အစိုးရမှ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
၁၉၆၇ ခုတွင် ကရင် လူငယ်ခေါင်းဆောင်တဦးအဖြစ် စစ်အစိုးရ၏ ဖမ်းဆီးမှုကို မန်းငြိမ်းမောင် ခံရပြီး ကိုကိုးကျွန်း အကျဉ်းစခန်းသို့ အပို့ခံခဲ့ရဖူးသည်။ အခြားရဲဘော် နှစ်ဦးနှင့်အတူ လှေဖြင့် ထွက်ပြေးကာ မြန်မာပြည် ကမ်းခြေတခုတွင် အောင်မြင်စွာ ဆိုက်ကပ်နိုင်ပြီး ဒေသ အာဏာပိုင်များက ပြန်လည် ဖမ်းဆီးခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
ကျွန်းမှ စွန့်စား ထွက်ပြေးမှု အတွေ့အကြုံများကို ‘ရဲဘော်ရှောင်း’ ကလောင်အမည်ဖြင့် ‘မုန်တိုင်းကို ဆန်၍ ပင်လယ်ကို ဖြတ်သောအခါ’ စာအုပ် ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့ဖူးသည်။
ယမန်နေ့ ၁၈-၀၃-၂၀၁၂ ရက်နေ့မှာ ကရင်လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ နော်ဇန်နာ ဦးဆောင်ပြီး အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် Myanmar Egress မှာ အချေအတင် ဆွေးနွေးပြီးနောက် ယနေ့မနက်(၇)နာရီ အချိန်မှာ ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ကို လွှတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
ယခုလို ငြိမ်းချမ်းရေးဖေါ်ဆောင်တဲ့ကာလမှာ ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ကို လွှတ်ပေးမှသာ အပြန် အလှန် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံရေးလေ့လာသုံးသပ်သူတွေက ဆိုကြပါတယ်။
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအရ ပဒိုမန်းငြိမ်းမောက်ကို နေပြည်တော်သို့ ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းလည်း သိရပါတယ်။
နော်ဇူဆဲနာနှင့် ဒေါ်စု တွေ့ဆုံစဉ်
ကေအင်န်ယူ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနဲ့ကြံ့ ဖွတ်သိန်းစိန်အစိုးရရဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်
အဖွဲ့ တို့ငြိမ်းချမ်းရေးပဏာမလက်မှတ်ထိုးပွဲမှာ ကြံ့ ဖွတ်ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ က
ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရတဲ့ ကေအင်န်ယူခေါင်းဆောင် မန်းငြိမ်းမောင်ကိုငြိမ်းချမ်းရေး
လက်ဆောင်အဖြစ် ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ နှုတ်ဂတိပေးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့ မှာတော့ မန်းငြိမ်းမောင်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးလက်ဆောင်ပစ္စည်းတခုအဖြစ် သတ်မှတ်ခြင်း မခံရဘဲအကြိမ်ကြိမ်ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခံရပြီး နောက်ဆုံးတော့အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်တသက်
တကျွန်း ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။
တကယ်တော့ ကေအင်ယူငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဟာရန်သူဗမာစစ်အုပ်စုနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ သွားကတည်းကကိုယ့်ကိုယ်ကို အနိမ့်ဈေး(လျော့ဈေး)နဲ့ သွားထိုးအပ်သလို ဖြစ်နေပါတယ်လို့အချို့ က ဝေဖန်သုံးသပ်ကြပါတယ်။
ကိုယ့်ဘက်က ဘာအချက်တွေကိုဦးစားပေးဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့ အစီအစဉ်တွေမရှိသလိုပါဘဲ... သွားရောက် တဲ့နေ့ ညမှာဘဲ ၇န်သူနဲ့ ပုခုံးချင်ဖက် စားသောက်ကြနောက်တနေ့ မနက်ကျတော့မိနစ်ပိုင်းအတွင်း စားပွဲဝိုင်းမှာ အလာဘ သလာဘစကားပြော ပြီးတော့အဆင်သင့်ရိုက်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာစာရွက်ပေါ်မှာ လက်မှတ်ကိုယ်စီထိုးကြ ...ဒါလားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲ......(အေးပေါ့လေ...သွားတဲ့လူတစုကလည်း အမျိုး သားရေးကို ရောင်းစားချင်တဲ့လူတချို့ ပါဝင်နေတာကိုး)။
ရန်သူဘက်ကိုယ်စားလှယ်က..``.မင်းတို့ ဘက်က ကေအင်န်ယူနဲ့ ပါတ်သက်တဲ့ အကျဉ်းသားတွေရှိရင် စာရင်းတင်ပြ ကျနော်တိုလွှတ်ပေးမယ် ``လို့ ပြောလာမှဘဲ...အဲဒီအချက်ကို ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးေ တွက ပြန်သတိရပုံရပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဌာနချုပ်ကိုပြန်ရောက်ပြီးနောက်ပိုင်း စားရင်းတွေ အပူတပြင်း လိုက်ကောက်ပြီးရန်သူဆီပြန်ပို့ ပေးတယ်လို့ ကြားရပါတယ်.. .အဲဒီလောက်ထိ
အလာဘသလာဘ စကားတွေပြောပြီး စကားလမ်းကြောင်းတိုက်ဆိုင်လာလို့ 
သာ ပြောဖြစ်ပုံရပါတယ်...ဒါပေမဲ့ ရန်သူကိုယ်စားလှယ်ဘက်က
တကယ်တော့လည်း အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ကိုယ့်ကေအင်န်ယူကိုယ်စားလှယ်တွေကဘာဘဲတောင်း ဆိုတောင်းဆို ရန်သူကိုယ်စား လှယ်တွေက ပေးဖို့ အဆင်သင့်ပါဘဲ...ရန်သူဘက်က ဘာနဲ့ မှရင်းစရာမလိုဘဲ အပေါ့ပါးဆုံး လေနဲ့ ဘဲရင်းရတာကိုး...ရန်သူရဲ့ အလိုချင်ဆုံးက သူတို့ နဲ့ အကြီးမား ဆုံးတော်လှန် ဆန့် ကျင်ဘက်အဖွဲ့ ကြီးတဖွဲ့ ရဲ ငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့ စာရွက်တရွက်ဘဲ ... အခြားဘာမှမလို....လုံလောက်ပြီး...ရန်သူ့ အတွက် အကျိုးအမြတ်ကတော့ အတုံးအခဲကြီးကြီးနဲ့ရသွားပြီး ကိုယ့်ဘက်ကပေးဆပ်လိုက်ရတာကတော့ တန်ဖိုးဖြတ်လို့ မရပါဘူး။
ရန်သူနဲ့ ကိုယ်နဲ့ တိကျ၊ သေချာရေရာတဲ့အပေးအယူမရှိဘဲ...လက်မှတ်ထိုးလိုက်တာက ကိုယ့်ကိစ္စ(ကိုယ့်အမှားလို့မဆိုလိုချင်ပါ)။ရန်သူဟာ ဂတိတည်တဲ့ လူမျိုးမဟုတ်မှန်းလဲ ကိုယ့်မျိုးဆက်နဲ့ချီပြီး သင်ခန်းစာတွေ အများကြီးရခဲ့ပါပြီး...
``အထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေ ဗမာစစ် အစိုးရကို ယုံမိပြီ၊ အခြေအနေ မကောင်းတော့တဲ့အခါ နောက်တခေါက်တောခိုဖို့ အတွက် ခိုစရာတောတွေ မရှိတော့ရင် မိမိရော မိမိလူမျိုး မျိုးဆက်တွေပါ ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ပျောက်ဆုံးဖို့ ကိန်း ဆိုက်ရောက်မှာသေချာတယ်``
ရန်သူက ကေအင်န်ယူနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စ ဆက်လက်ဆွေးနွေးဖို့ နှစ်ဖက်စလုံးက ခြေလှမ်းတွေ ဆက်လှမ်းနေချိန်မှာကေအင်န်ယူခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့မန်းငြိမ်းမောင်ကိုတော့အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ်တသက်တကျွန်းချမှတ်လိုက်တာဟာ ရန်သူစစ်အုပ်စုကကေအင်န်ယူအပါအ၀င် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးနေတဲ့ ကရင်လက်နက်ကိုင် အင်အား စုတွေရဲ့ နားရွက်ကို တံတွေးစွတ်လိုက် တာဖြစ်ပါတယ်။သွေးတိုးစမ်းတဲ့သဘောပါ။ `` မင်းတို့ ကရင်တွေဘာတတ်နိုင်သေးလဲပေါ့.``..ဒီသက်သေသာဓကတွေဟာ ယနေ့ ကရင်လူမျိုးအကျိုးကို
သယ်ပိုးပါတယ်ဆိုတဲ့ ကရင်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေ၊နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ၊ကရင်ပြည် သူတွေ သေ ချာပြန်လည် သုံးသပ်ဖို့ လိုပါတယ်။`` မင်းတို့ ကရင်တွေကိုငါတို့ မဟာဗမာတွေက လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်လို့ ရတယ်``ဆိုတဲ့အထာနဲ့ စော်ကားမော်ကားလုပ်သွားတာကိုဒီလိုဘဲလက်ပိုက်ကြည့်နေမလား...
.အထူးသဖြင့်မျိုးချစ်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုပြောချင်ပါတယ်။ တော်လှန်ရေးအမျိုးသားခေါင်းဆောင်တယောက် ဒီလိုမျိုးမတရားအနိုင်ကျင့်ခံရတာကို ကိုယ့်နဲ့ မဆိုင်ဘူး။ ကိုယ်တို့ ကတော့ ရန်သူပေးတဲ့အခွင့်အရေးကို ``အခွင့်သာတုန်း တထမ်းစာဘဲဖြစ်ဖြစ် တနပ်စာဘဲဖြစ်ဖြစ် ရတုန်းအရင်ယူထားလိုက်ရမှ`` လို့ မခံ ယူလိုက်မိပါနဲ့ ။တနေ့ ကျရင် ဒီလိုမျိုးမတရားအနိုင်ကျင့်ခံရတဲ့အဖြစ်မျိုး ကိုယ့်အလှည့်မရောက် လာနိုင်ဘူးလို့ ဘယ်သူပြောနိုင်မလဲ။
မဟာဗမာစစ်အင်အားစုတွေရဲ့ အဓိကရန်သူဟာ ကိုယ့်ကရင်လူမျိုးပါလို့ ဒီနေရာမှာ ထပ်လောင်းပြောချင် ပါတယ်။ ကိုယ့်ကရင်လူမျိုးတွေ အားလုံးပျက်သုန်းသွားအောင်ရန်သူကအကွက်ကျကျ စီစဉ်နေ ပါတယ်.... ကိုယ့်ကို မက်လုံးတွေအချို့ ပေးပေမဲ့တနေ့ ကျရင် အဲဒီမက်လုံးတွေဟာ ကိုယ့်အတွက်အဆိပ်အတောက်တွေ
ဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာ ကြိုတင်တွေးထားဖို့ လိုပါမယ်။
အခုလဲ ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ်ခေါင်းဆောင်တွေ တချို့ ကုပ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေဖြစ်သွားကြတယ်၊ အဖူ့ ထိန်မောင်ခေါင်းဆောင်တဲ့ငြိမ်းအဖွဲ့လုပ်ကွက်တွေအများကြီးရသွားတယ်၊ မနေ့ တနေ့ ကမှ ငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ်ထိုးသွားတဲ့ဗိုလ်မှူးစောလားပွယ်ဦးဆောင်တဲ့ ဒီကေဘီအေအဖွဲ့ တွေလဲ စီးပွါးရေး အတွက်ဆိုင်းပြင်းနေတယ်.. .(ပြီးခဲ့တဲ့ရက် သတင်းတွေမှာမြ၀တီ..မဲဆောက်လိုင်းကါးထောင်တာ)။ နောက်ဆုံးတော့ ပုထုဇဉ်ရဲ့ သဘော သဘာဝအရငွေတွေ ဆည်းဇိမ်တွေ အဆိပ်တက်လာပြီးဆိုရင် ဘယ်သူ့မှအမျိုးသားရေး အကြောင်းပြော လာမှာ မဟုတ်တော့ပါ။
မယုံရင် အရင်ငြိမ်းယူထားတဲ့လူတွေဆီမှာ တီးခေါက်ကြည့်လိုက်ပါ။ ၉၉ ရာခိုင်နှုန်းလောက်က
ရန်သူကပေးတဲ့မစို့ မပို့ အခွင့်အရေးနဲ့ ကျေနပ်အားရနေမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်တ၀မ်းစာတော့စားရမယ် ။ ဒါပေမဲ့ နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်သစ်တွေကို ကျွန်ဇာတ်သွင်းရာရောက်သွားတဲ့ တရားခံတွေ ဖြစ်သွားပါမယ် ။ဒီအချက်ကို မျိုးချစ်လက်နက်ကိုင် ကိုယ့်လူမျိုးအင်အားစုတွေ သေချာပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့ လိုပါတယ်။
ယနေ့ ကရင်အမျိုးသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုကြီး သုံးဖွဲ့ စလုံးက ရန်သူနဲ့ ငြိမ်း ချမ်းရေးဆွေးနွေး ပွဲလမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်နေပါတယ်။ ဒီသုံးဖွဲ့ စလုံးက သူ့ ထက်ငါ အရင်၊ ရန်သူပေးတဲ့အခွင့်အရေးတွေကို ပိုရလိုချင်နိုးနဲ့ခြေလှမ်းလှမ်းနေရင်တော့ ရန်သူရဲ့ ထောင်ချောက်ထဲကို မလွှဲဧကန် ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့ ရှိနေတဲ့ကိုယ့်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေ အင်အားစုကြီးတခုအဖြစ် မပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဘူး ဆိုရင် နောက်နောင်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်စရာလမ်းစ အလှန်းဝေးနေသလို လက်ရှိအင်အားစုခွဲတွေ ကလည်း ပျောက်ဆုံးဖို့ သာရှိပါတော့တယ်။
မဟာဗမာစစ်အစိုးရရဲ့ အပေါ်ရံတိုးတက်ပြောင်းလဲမှု ဟန်ဆောင် ပြသနေတာကို နိုင်ငံရေးအင်အားစု၊ တိုင်းရင်းသားအင်အားစုတွေအဟုတ်မှတ်ပြီး ယုံကြည်မိရင်တော့ ကိုယ့်လည်ပင်းကိုယ် ကြိုးကွင်းစွပ်သလိုဖြစ်သွားပါမယ်။ အထူးသဖြင့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေ ဗမာစစ်အစိုးရကို ယုံမိပြီ၊ အခြေအနေမကောင်းတော့တဲ့အခါ နောက်တခေါက် တောခိုဖို့ အတွက် ခိုစရာတောတွေမရှိတော့ရင် မိမိရော မိမိလူမျိုး မျိုးဆက်တွေပါ ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာ ပျောက်ဆုံးဖို့ ကိန်း ဆိုက်ရောက်မှာသေချာတယ်။
ကရင်လူမျိုးတွေအတွက် အမျိုးသားအောင်မြင်မှုပန်းတိုင် လက်တကမ်းမှာရှိနေပါတယ် ။ ညီအစ်ကိုချင်း စည်းလုံးညီညွတ်ရင် တမင်းတလုတ်နဲ့ဝအောင်အတူဝေမျှစားသောက်နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ့်လူမျိုးအင်အား စုတွေ ကောင်းသောသမိုင်းကြောင်းတွေရေးဖို့ အချိန်မနှောင်းသေးပါဘူး...ရန်သူပေးတဲ့မက်လုံးကို မမက်မောလိုက်မိပါနဲ့ ။
လက်တွေ့ ကျကျစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ယခု ကရင်သုံးဖွဲ့ လုံး ရန်သူနဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးစကားပြောတဲ့အချိန်မှာ အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ကို မတရားအနိုင်ကျင့်စော်ကားတာဟာ ရန်သူက ကိုယ့်ကို လူရာမသွင်းကြောင်းသက်သေသါဓကဘဲ။
ဗဒိုမန်းငြိမ်းမောင်ကို ဗမာစစ်အုပ်စုက ငှင်းတို့ ရဲ့ အရင်ဂတိအတိုင်း ငြိမ်းချမ်းရေးလက်ဆောင် အနေနဲ့ ကရင်တွေကို ပေးခြင်းမဟုတ်ဘဲ စစ်ရေးရာဇသံအနေနဲ့ ပေးခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကိုယ့်လက်ပေါ်မှာရှိတဲ့လက်နက်နဲ့ဗမာစစ်အစိုးရရဲ့ စစ်ရေးရာဇသံကို ဘယ်လိုတုံ့ ပြန်မလဲဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သိသင့်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း....
* ကရင်နှစ်သစ်ကူးနေ့ ---ပြာသိုလဆန်း ၁ရက်နေ့* ကရင်တော်လှန်ရေးနေ့ --- ဇန်န၀ါရီလ 31ရက်နေ့* ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနေ့--- ဖေဖော်ဝါရီလ 5ရက်နေ့ * ကရင်အမျိုးသားနေ့--- ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၁ရက်နေ့ * ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံးနေ့ --- ဧပြီလ 5ရက်နေ့* ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံးနေ့ ---မေလ 23ရက်နေ့ * ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်နေ့ ---ဂျူလိုင် 5ရက်နေ့* ကရင့်အာဇာနည်နေ့ ---သြဂုတ်လ 12ရက်နေ့ * ကရင်ချည်ဖြူဖွဲ့ (လက်ချည်ပွဲ)နေ့ --- ၀ါခေါင်လပြည့်နေ့
နိုင်ငံတကာ တိုက်ရိုက်ဘောလုံးပွဲစဉ်တွေကို ဒီမှာနှိပ်ပြီး ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
စစ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ဂျော်နီထံသို့ မန်းရောဘတ် ဘဇန်၏ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
Mahn Robert BaZan Letter to Gen. Saw Johnny-2 (2) by 9dblood ကာမရာဂ ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ မွတ်ဆလင် တို့ကို ဒေါပွ စေခဲ့ သည့် ဇာတ်ကား ကို ရိုက်ကူး ခဲ့
မွတ်ဆလင် ကမ္ဘာ ကို ဒေါသူ ပုန် ထစေခဲ့ သည့် အရိုးခံ မွတ်ဆလင် လေး များ (Innocence of Muslims) ရုပ်ရှင် ကား ကို ရိုက်ကူး ခဲ့ သည့် ဒါရ...
မလေးရှားကရင်နှစ်သစ်ကူးပွဲတော်သို့ ဒုတိအကြိမ်မြောက် လာရောက်ဖျော်ဖြေမည့် ကရင်အဆိုတော် (ဆိုဒ်အ်ုတာ)နှင့် ထိုင်းရုပ်သံ အင်တာဗျူး
ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီး အိမ်ဖော်မလေးက ယေရှုခရစ်တော်ကိုသာ ကယ်တင်ရှင် ဖြစ်ကြောင်း ပြောသဖြင့် အိမ်ရှင် ဆော်ဒီမိသားစုက သူမ၏ ပါးစပ်နှင့် ဘယ်ဘက်မျက်ခမ်းများကို ပလတ်စတစ်ကြိုးနှင့် ချုပ်၍ အပြစ်ပေး စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့က အောက်ပါမူရင်းပို့စ့လင့်မှာ တင်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦး ဆော်ဒီအာရေဗျနိုင်ငံမှာ အိမ်ဖော်အဖြစ် လု...
ပူးတွဲစစ်ရေးပြ အခမ်းအနားကို ဘာကြောင့်လုပ်ခွင့်မပေးတာလဲ။
ရွှေကုက္ကိုမှာပြုလုပ်မဲ့ ကမ္ဘာ့အမ်းအနားဆုံး ကရင့်အမျိုးသားနှစ်သစ်ကူးနေ့မှာ ကရင့်လက်နက်ကိုင်များ ပူးတွဲပြုလုပ်မဲ့ စစ်ရေးပြ အခမ်းအနားကို မြန်မာဘက...
SEA GAMES 2013 OPENING CEREMONY (LIVE)ယနေ့ ည ၆ နာရီ မှ ၁၁ နာရီအထိကျင်းပမည့် ဆီးဂိမ်းစ်ဖွင့်ပွဲအား တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်
ယနေ့ ည ၆ နာရီ မှ ၁၁ နာရီ(မြန်မာစံတော်ချိန်)အထိ ကျင်းပမည့် ဆီးဂိမ်းစ်ဖွင့်ပွဲအား တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန်။ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ကရင်သီချင်း
ရန်ကုန်မူးယစ်အရှေ့အထူးအဖွဲ့ စစ်ဆေးချက် စိုးမြတ်သူဇာ (ခ) မစိုး၏ အစစ်ခံချက် (၃ဝ-၄-၂ဝဝ၈)
ရန်ကုန်မူးယစ်အရှေ့အထူးအဖွဲ့ စစ်ဆေးချက် စိုးမြတ်သူဇာ (ခ) မစိုး၏ အစစ်ခံချက် (၃ဝ-၄-၂ဝဝ၈) အပိုင်း(၃) ၁။ အမည် - စိုးမြတ်သူဇာ (ခ) မစိုး ၂။ အသက...
အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ပြန့်နေသည့်အနုပညာရှင်များနှင့် မူးယစ်ဆေးဝါးကိစ္စ ရုပ်ရှင်လောကသားများ တုံ့ပြန်ပြီ
Posted by AF in ဆောင်းပါးများ သတင်းကိုလူတိုင်းစိတ်ဝင်စားကြသည်။ သတင်းထူးသတင်းဦးဆိုပါက ပို၍ပင် စိတ်ဝင်တစားရှိတတ်ကြသည်။ သတင်းဆိုသည်ကို တစ...
တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် ညီလာခံကျင်းပရေး KNU ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးခေါ်ယူ
The Voice Weekly ဒီဇင်ဘာ ၆ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် ဘုံသဘော တူညီချက်တစ်ခု ချမှတ်နိုင်ရန် ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ပြုလုပ်မည့် တ...
9dblood@gmail.com. Powered by Blogger.
မြစ်နဒီကိုးသွယ် ဖူ့တာမိက် အဲခေါင်သောင့် ဆာ့တူဝေါ်
အမိကရင်ပြည် ကေအဲန်ယူ(ဂျပန်) အိုင်တီခရီးသွား
ကိုးဒီသွေး OKRSO စံင်ပါဖ၀့်
မန်းကိုကို စ၀်ဍုံလိုဲ့ ဇွဲကပင်မျိုးချစ်လူငယ်(စင်္ကာပူ)
KYO Korea ထော့မဲပါ သောသီခို
ဦးမြင့်လှိုင်အား တရားဥပဒေအရ အရေးယူရန် လွှတ်တော်ကို...
လယ်/ဆည်ဝန်ကြီး လွှတ်တော်ကိုတောင်းပန်ရန် အမတ်များတော...
Karen refugees among 14 homeless after Ottawa fire...
အစိုးရတပ်အား ပြန်လည်တုံ့ပြန်မည်ဟု သျှမ်းတပ်မှူးပြေ...
ခလရ တပ်ရင်း (၁၃၀) ကင်းစောင့်သည့် စစ်သားများမှ အပြစ...
Copyright © 2012 ကိုးဒီသွေး | Powered by 9dblood.com